Kursiga Musqusha, Brace Sport, Daboolka Musqusha Caaga - Haorui
Ciyaaraha Iyo Caafimaadka
Gudaha iyo Bannaanka
Ku dhowaad 20 sano, HAORUI waxay sii wadaysaa wada shaqeynta muddada-dheer dukaammada waaweyn ee silsiladda waaweyn ee Yurub, sida LIDL, ALDI, EDEKA, NORMA, NETTO, ROSSMANN iyo wixii la mid ah.Waxay la shaqeeyaan milkiileyaal la xushay oo la kormeeray oo heer A ah si ay macaamiisha u siiyaan qiimo jaban dammaanad Hada HAORUI badanaa waxay wax kaqabtaa sedex koox oo ah sheyga ugu muhiimsan - Alaabada musqusha, Isboortiga & alaabada Caafimaadka, Alaabada Wooden.
Maalin fiican ayaa halkan ka bilaabmaysa. Alaabadayada kala duwan ee musqusha waxay ka dhigayaan musqushaada mid nadiif ah oo aad u habboon. Qalab iyo naqshado kala duwan ayaa muujinaya shakhsiyaddaada gaarka ah. Maalin mashquul ah ayaa halkan ku eg. Tayada lagu kalsoonaan karo ayaa ah balanqaadkeena aan isbeddelayn. Muuqaal qurux badan iyo dareemid shey ayaa hagaajinaya niyaddaada. Fadlan isdeji xilligan.
Laga soo bilaabo isticmaalka guud ee maalinlaha ah ilaa isboorti xirfadeed iyo adeeg caafimaad, kooxdayadu waxay ku siin karaan naqshado ku saleysan baahidaada dhabta ah ee howlaha kala duwan iyo ujeedo adeegsiga: Ilaalinta isboortiga ee qeybaha kala duwan ee jirka, gacmo diirimaad iyo isku soo xoqid, dharka shaqeynaya iyo xargaha ayaa leh saameyn gaar ah, cag daryeelka, qabowga & kuleylka, Lafaha iyo kaalmada caafimaadka ... Xulkaaga u samee si xor ah, anaguna dhabarkaaga ayaan ku jirnaa.
Alaabada caruurtu ku ciyaarto ee alwaaxa ah waxay siinayaan carruurta meel bannaan oo ay ka soo saari karaan wax kasta oo duurjoogta ah iyo xad-dhaafka ah ee mala-awaalkooda sii kordhaya. Alaabada carruurtu ku ciyaarto ee alwaaxda ah waxay kobcin karaan isdhexgalka carruurta kale waxayna kobcin karaan wadaagga iyo wada shaqeynta; Alaabada carruurtu ku ciyaarto ee looxa loo yaqaan 'alwaax' ayaa sidoo kale soo bandhigaya xiriir toos ah oo lala yeelanayo dunida dabiiciga ah ee carruurta ... Dhammaan alaabada lagu ciyaaro ee alwaaxa leh ee midabada leh ayaa hubaal laga yaabaa inay kobciyaan noloshaada iyo tan qoyskaaga.
Faa'iidada Hebei Haorui
Waa kuwan sababo yar oo aad u dooratay Hebei Haorui
Ka shaqee hal-abuurnimada shaqooyin kala duwan iyo naqshado ku saleysan baahida dhabta ah ee macaamiil kasta.
Ku shaqee nidaam kasta oo amar dhan ah laga soo bilaabo su'aalaha illaa xamuulka weelka. Sii macaamiisha adeeg dhammaystiran oo cayiman.
Waxbadan ka baro HAORUI
Kormeer oo kormeer dhammaan howlaha wax soo saar, Hubso in badeecadaha lagu keenay xaaladda ugu wanaagsan.
HAORUI waxay leedahay shahaadooyin dhameystiran iyo nidaamka maamulka imtixaanada, waxay lashaqeeyaan lamaanayaasha machadka 3aad iyo shaybaarada –SGS, BV, Hohenstein, TUV, Intertek iyo wixii la mid ah. oo leh BSCI, SEDEX, ISO, FDA iyo Oeko-tex, GS, CE, PEFC, shahaadooyinka FSC, Hubinta Tayada waa falsafadda aasaasiga ah ee Haorui ee dhammaan ganacsiga.